नेपालमै २० लाख रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्छौं, अब युवाहरुले विदेश जानु पर्दैन : राज्यमन्त्री दुगड - News25 Daily
July 2, 2020 adminLeaveaComment on नेपालमै २० लाख रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्छौं, अब युवाहरुले विदेश जानु पर्दैन : राज्यमन्त्री दुगड
नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडसँग कोरोना महामारी र यसले सिर्जना गरेको संकट, वेरोजगारीको समस्या, निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका अफ्ठ्यारा तथा यी यावत समस्याको समाधानका लागि सरकारले के—के काम गर्दैछ भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानीः
तपाईंले म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री हुनासाथ कोरोना आयो र लकडाउन भयो भन्ने आसयको प्रश्न गर्नुभयो, यो मेरो दोष त होइन (हा हा हा) । यो एउटा संकट र चुनौती पनि हो । तर यसबाट डराएर हुँदैन । यसप्रकारका महामारी वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाविपत्तीहरु त आइरहन्छन् । मान्छेको जिन्दगी नै स्ट्रग्लिङ हुनुपर्छ ।
स्मुथ हुनुहुँदैन । यस्तो हुनु पनि पर्छ । समस्या आउँछन् र सँगसँगै समाधान पनि निििस्कन्छन् । यो एउटा ठूलो समस्या देश र जनताको लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि हो । यसको पनि समाधान हुन्छ । मुलुकले लकडाउनको सामना गरेको करिब ३ महिना भइसकेको छ । यो तीन महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ पनि निक्कै कन्ट्रोल भइसकेको छ । तर एकातिर संक्रमितहरु बढेको बढ्यै छन् ।
हाम्रो टेस्टिङ बढेसँगै संक्रमित बढेको देखिएको हो । तर यी नयाँ संक्रमित हुन् भन्न मिल्दैन । यो समस्या भारतबाट आउने र केही मात्रामा समुदायमा पनि देखिएको पक्कै हो । तर यो देशभित्र फस्र्ट स्टेजको मात्रै हो । यो समुदायस्तरमा भने अझै सरिसकेको छैन । यसबाट धेरै चिन्तत हुनुपर्ने, डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
अब सरकारले लकडाउनलाई विस्तारै लुज गर्दै गइरहेका अवस्था पनि छ । अब हाम्रो व्यापार, उद्योगधन्दाहरु पनि बिस्तारै सुचारु गर्दै लौजाने सरकारले नीति अख्तियार गरेको छ । यसबीचमा हामीसँग चुनौतीहरु पनि अनगिन्ती नै छन् । यो सानो कुरो होइन । तीन महिनादेखि हामी पूर्णरुपमा शिथिल भएर बसेका छौँ । बेरोजगारीको ठूलो समस्या देखिएको छ ।
रोजगारीका लागि विदेशिएका हाम्रा युवाहरु पनि फर्किएर आइरहेका छन् । अब लाखौँको संख्यामा युवाहरु फर्किन्छन् । २० औँ लाखको संख्यामा बेरोजगारीको सिर्जना हुन्छ, यसमा शंका छैन । विश्वमा आर्थिक मन्दी छाइसकेको छ र त्यो हामीकहाँ पनि हुन्छ । अब यो आर्थिक मन्दीलाई कसरी पार लगाउने, कसरी समस्या समाधान गर्ने, कसरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने ? यी यावत् विषयहरु गम्भीररुपमा हाम्रा सामू उभिएका छन् । यसमा हामी योजना बनाएर अघि बढ्छौँ ।
हाम्रो देशमा सानो सियो पनि बन्दैन । हामी हरेक चीज भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्भर छौँ । ती चीजहरु हामी यहीँ किन बनाउन सक्दैनौँ ? यतातिर हामीले ध्यानै दिएनौँ । अहिले हाम्रो मन्त्रालयले पनि जुन बस्तु नेपालमा बन्दैन, त्यसमा ठूलो लगानी पनि गर्नु पर्दैन त्यस्ता उद्योग र वस्तुहरुको हामीले लिष्ट बनाएका छौँ । जसले पहिलो उद्योग नेपालमा खोल्ने लक्ष्य लिन्छ, उसलाई धेरै सहयोग गर्ने नीति सरकारको छ ।
त्यस्ता उद्योगहरुलाई धेरै सुविधा दिएर सरकारले सहयोग गर्छ । हामी त्यस्ता उद्योगमा जान सबैलाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ । तपाईंहरु आउनुहोस्, तपाईंको लाइसेन्स सिस्टमदेखि लिएर बजारको व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थदेखि आइडिएम, सेज, ग्राम उद्योगहरु छन्, तिनलाई समेत हामी स्थान दिन्छौँ । तपाईंहरुलाई बिजुलीदेखि करसम्मका विषयमा हामी सुविधा दिन्छौँ । स्वदेशमै बसेर जो जसले नयाँ उद्योग खोल्छन् उनीहरुलाई अधिकतम् स्वतन्त्रता दिने सरकारको नीति छ ।
अब हामी अधिकतम् मात्रामा आत्मनिर्धर हुनैपर्दछ । हामी हरेक चीजमा अरुसँग निर्भर छौँ । ठूल्ठूला सिमेन्ट फ्याक्ट्री, जुटमिल, स्टिलमिल र तेल उद्योगले मात्रै चल्दैन । यहाँ त सानोदेखि सानो बस्तु पनि उत्पादन गर्नुपर्दछ । हामी औद्योगिकीकरणमा जाने कुरा गरिरहेका छौँ । औद्योगिकीकरणमा जान त उद्योगले उत्पादन गर्ने हरेक वस्तु यहाँ उत्पादित हुनुपर्छ गर्नुपर्छ ।
उदाहरणको रुपमा हामीभन्दा भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसंख्या आदि हिसाबले पनि धेरै सानो मुलुक हो ताइवान । तर यसको उत्पादन विश्वमा देखिन्छ । किनभने उनीहरुले गुणस्तरीय सामान बनाउँछन् । सरकारले उद्योमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अब हामी पनि गर्छौं । हामी ताइवानभन्दा कम छैनौँ । हामी पनि गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरेर नेपाली ब्राण्डलाई लोकप्रीय बनाउन सक्छौँ । यतातिर हामीले सोच बनाउनुपर्छ ।
अब हामीले मानसिकता बदल्ने बेला आइसकेको छ । अब गरिब मानसिकता तथा पुरानो मानसिकताले हुँदैन । अब आधुनिक मानसिकताले काम गर्नुपर्छ । हाम्रो इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास बढाउने बेला आइसक्यो । यदि यी कुराहरु हामीले आत्मसाथ गर्यौँ भने पक्क पनि हामी हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ । त्यसो हुँदा विकसित देशहरुको श्रेणीमा आउन हामीलाई समय लाग्दैन । हामीसँग भएका जति पनि सम्भावना छन् तिनलाई इमान्दारितापूर्वक उपयोगमा ल्यायौँ भने काम गर्न समय लाग्ने छैेन ।
अहिले हाम्रा सरकारी संस्थानहरु अधिकांश बन्द छन् । केही चालु छन् भने ती पनि घाटामा छन् । निजी क्षेत्रका धेरै उद्योगहरु पनि रुग्ण बनेर बन्द भइसकेको अवस्था छ । त्यस्ता उद्योगहरुलाई पुनर्जीवन दिनका लागि हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएका छौँ । एउटा प्लानिङ गर्दैछौं । त्यो हिसाबले हामी सबै उद्योगलाई पुनः चलाउने छौँ ।
विदेशबाट नेपालीको उद्धार उडानमा संलग्‍न चालक दलका ७ जनामा कोरोना संक्रमण